Madaarka Frankfurt Oo Bilaabay Jadwalka Jiilaalka Cusub: Duulimaadyada taga 244 Meelo ee 92 wadan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Madaarka Frankfurt Oo Bilaabay Jadwalka Jiilaalka Cusub: Duulimaadyada taga 244 Meelo ee 92 wadan
Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • News • War-Saxaafadeed • Gaadiidka • Wararka Mareykanka
Anzeigetafel *** Qoraal Maxalli ah ***
Jadwal cusub oo jiilaal ah ayaa ka dhaqan galaya garoonka diyaaradaha ee Frankfurt (FRA) Oktoobar 31. Jadwalku wuxuu muujinayaa wadar ahaan 83 shirkadood oo duulimaadyo rakaab ah oo taga 244 goobood oo ku kala yaal 92 waddan oo adduunka ah.
Duulimaadyo cusub oo ku taga Maraykanka ayaa laga heli karaa FRA
Frankfurt Jadwalka jiilaalka waxaa ku jira duulimaadyo badan oo Caribbean iyo Bartamaha Ameerika
Meelo badan oo Yurub ah ayaa laga reebay jadwalka xagaaga ee FRAPORT
Iyada oo si tartiib tartiib ah kor loogu qaadayo xayiraadaha safarka ee la xidhiidha masiibada, meelo badan iyo diyaarado ayaa lagu dari karaa ogeysiis gaaban jadwalka. Marka la barbar dhigo garoommada kale ee Jarmalka, FRA waxay mar kale bixin doontaa doorashada isku xirka ugu ballaadhan jiilaalkan. Tani waxay hoosta ka xariiqaysaa doorka Frankfurt oo ah xarunta duulista caalamiga ah ee ugu weyn uguna muhiimsan. Jadwalka cusub ee jiilaalka waxa uu sii jiri doonaa ilaa Maarso 26, 2022.
Isku celcelis ahaan 2,970 duulimaad todobaadle ah (bixitaan), ayaa la qorsheeyay bilowga xilliga jiilaalka ee Noofambar. Taasi waxay 30 boqolkiiba ka yar tahay xilliga u dhigma ee 2019/2020 (kahor faafka), laakiin 180 boqolkiiba in ka badan xilliga qaboobaha 2020/21. Tirada guud ee duullimaadyada la qorsheeyay waxaa ka mid ah 380 adeeg oo gudaha ah (intra-Jarmalka), 620 duullimaadyo isaga kala goosha qaaradaha, iyo 1,970 isku xirka Yurub. Isugeyn ilaa 520,000 oo kuraas ah ayaa la heli karaa toddobaadkii - qiyaastii 36 boqolkiiba ayaa ka hooseeya tirada 2019/2020.
Duulimaadyo badan oo Maraykanka taga ayaa laga heli karaa FRA
Tirada duullimaadyada Mareykanka ayaa si weyn kor ugu kacday, gaar ahaan ku dhawaaqida Mareykanka ee ah in dalka loo furo laga bilaabo 8-da Noofambar martida ajnabiga ah - waa haddii si buuxda loo tallaalo oo ay bixiyaan tijaabada taban ee loo yaqaan 'Covid-19' kahor dhoofinta.
Waxa jira xidhiidho joogto ah oo ka socda FRA ilaa 17 goobood oo Maraykan ah xilliga jiilaalka ee soo socda. Lufthansa (LH), United Airlines (UA), iyo Singapore Airlines (SQ) waxay u duuli doonaan magaalada New York maalin kasta. Intaa waxaa dheer, sidaha xilliga firaaqada ee Jarmalka Condor (DE) wuxuu shaqeyn doonaa shan duulimaad toddobaadle ah Big Apple laga bilaabo Noofembar.
1. Natiijo ahaan, waxaa jiri doona wadar ahaan ilaa shan duulimaad maalintiiba FRA ilaa John F. Kennedy (JFK) ama Newark (EWR). Delta Airlines (DL) waxay sidoo kale u duuli doontaa maalin kasta New York-JFK laga bilaabo bartamaha Disembar. Waxaa intaa dheer, United Airlines iyo Lufthansa waxay bixin doonaan 20 duulimaad toddobaadkiiba Chicago (ORD) iyo Washington DC (IAD).
Lufthansa iyo United labaduba waxay u duuli doonaan maalin kasta San Francisco (SFO) iyo Houston (IAH), iyo Denver laba iyo toban jeer todobaadkii. Lufthansa iyo Delta waxay duullimaadyo ku tegi doonaan Atlanta (ATL) toban jeer toddobaadkii.
Meelaha kale ee Maraykanku u socdo waxaa ka mid ah Dallas (DFW) iyo Seattle (SEA) (oo ay u adeegaan Lufthansa iyo Condor), iyo Boston (BOS), Los Angeles (LAX) iyo Miami (MIA) (oo ay u adeegto Lufthansa). Intaa waxaa dheer, Lufthansa waxay bixin doontaa adeeg lix-jeer-toddobaadkii ah Orlando (MCO) iyo adeeg shan-jeer toddobaadle ah Detroit (DTW), waxayna u duuli doontaa Philadelphia (PHL) saddex jeer toddobaadkii. Laga bilaabo badhtamaha Disembar, side German Eurowings Discover (4Y) waxa uu duullimaadyo Tampa (TPA) ku tegi doonaa afar jeer toddobaadkii.
Goobaha fasaxa jiilaalka ee soo jiidashada leh
Jadwalka cusub ee FRA waxa uu leeyahay meelo badan oo qani ah oo lagu tago Bartamaha Ameerika iyo Kariibiyaanka. Tusaale ahaan, Condor, Lufthansa, iyo Eurowings Discover waxay bixin doonaan adeegyo meelaha fasaxyada soo jiidashada leh ee Mexico, Jamaica, Barbados, Costa Rica iyo Dominican Republic. Tan waxaa ku jira duullimaadyo joogto ah oo ku taga Punta Cana (PUJ; 16 jeer usbuucii) iyo Cancún (CUN; ilaa laba maalin).
Shirkado badan oo diyaaradeed ayaa sii wada inay bixiyaan duulimaadyo ka yimaada Frankfurt oo ay tagaan meelaha ay tagaan ee Bariga Dhexe iyo Bariga Fog. Iyadoo ku xiran horumarka xayiraadaha safarka ee Covid-19 ee ay soo rogeen qaar ka mid ah wadamada Aasiya, tirada isku xirka Bariga Fog ayaa laga yaabaa inay sii kordhiso. Xaaladdu weli waa mid firfircoon: Thailand, tusaale ahaan, waxay qorsheyneysaa inay furto xuduudaheeda bisha November. Duulimaadyada Singapore (SIN) ee ay maamulaan Lufthansa iyo Singapore Airlines oo ku dhex jira xadka marinka safarka ee rakaabka la tallaalay ayaa sidoo kale la heli doonaa xilliga jiilaalka.
Inta badan shirkadaha diyaaraduhu waxay dib u bilaabeen adeegyadii ay ku tagi jireen Yurub iyagoo ka yimid FRA xagaagan. Kuwaas hadda waa la sii wadi doonaa xilliga jiilaalka. Waxaa suurtogal ah in laga duulo FRA ilaa dhammaan magaalooyinka waaweyn ee Yurub dhowr jeer maalintii. Jadwalka jiilaalka waxa kale oo ka mid ah dhowr goobood oo loo dalxiis tago gudaha Yurub, oo ay ku jiraan Jasiiradaha Balearic, Canaries, Greece, Portugal, iyo Turkiga.
Macluumaadka la cusboonaysiiyay ee duullimaadyada la heli karo waxaa laga heli karaa www.frankfurt-airport.com